युवा पहिचानमाथि प्रहार
Monday, 11 March 2013 11:08	दीपेश केसी
उत्तर कोरियामा भनेजस्तो कपाल पाल्न सहज छैन। सरकारले वैधानिकरूपमा २८ किसिमका कपाल पाल्ने शैली निर्धारण गरेको छ जसमध्ये महिलाका लागि अठार र पुरुषलाई दश छन्। समाजवादी जीवनयापनको नाममा चालिएका कदमअन्तर्गत युवाहरूलाई अधिकतम् २ इन्चसम्मको कपाल पाल्न भनिएको छ। उत्तर कोरियाली सरकारले सन् २००५ बाट पुरुषहरूलाई छोटो कपाल पाल्न प्रभावित हुनेगरी अभियान चलायो। पश्चिमा प्रभावबाट नागरिकको कपालको शैलीलाई समेत मुक्त राख्न यी कदम चालिएका थिए। सरकारले आधिकारिकरूपमा विवाहिता र अविवाहिता महिलाका लागि समेत कपालको शैली तोकिदिएको छ। विवाहिता महिलाको कपाल छोटो हुनुपर्छ। उनीहरूका लागि सामान्य जीवनयापनमा समेत सीमित विकल्प मात्र छन्। जसअन्तर्गत रहेर कम्युनिष्ट शासनको कडा नियम पालना गर्नुपर्छ। तानाशाही शासनले लगाएको बन्देजहरूले आक्रान्त उनीहरू स्वतन्त्रताका लागि छट्पटिँदैछन्।
भूस्वामित्व र महिला किसान
Monday, 11 March 2013 11:07	जगत देउजा
वनको चरो। विभिन्न रुखमा फलेका फल चाख्दै हिँड्थ्यो। उसमा फूल फुलेका रुखमा फल लाग्छ र नफुलेकोमा फल लाग्दैन भन्ने ज्ञान पनि थियो। कुनै दिन चरोले सिमलको फूल देख्यो। जुन साह्रै सुन्दर थियो। चरालाई लाग्यो- आहा कति राम्रो फूल! यस्तो फूलमा कति मीठो फल लाग्ला? खान कति मजा आउला। चरो मनमनै कल्पियो। दिन बित्नै लाग्दा फल लाग्न पनि सुरु भयो। चरो मीठो फल पाक्ने र खान पाउने आशमा मुख मिठ्याउँदै रुख नछोडी बस्यो। तर पाक्ला भनेको फल एक दिन फुट्यो। जुन कपासले भरिएको थियो। चराको मीठो फल खाने इच्छा अपुरै रह्यो।
महिला हिंसाविरुद्ध तदारुकता
Monday, 11 March 2013 10:59	पुष्पा घिमिरे
हाम्रो समाजमा मानव सभ्यताको प्रारम्भकालदेखि नै लैंगिक विभेदका आधारमा महिलामाथि उत्पीडन रहँदै आएको छ। र, यो पनि यथार्थ हो कि महिलामाथि हुने त्यस प्रकारका विभेद र अत्याचारविरुद्ध इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा समाजकै सचेत वर्गको पहल र नेतृत्वमा विभिन्न संघर्ष र आन्दोलन पनि हँुदै आएका छन्। फरक यति हो कि कति संघर्ष संगठित र योजनाबद्धरूपमा भएका छन् भने कति स्वस्फूर्त र असंगठितरूपमा। कुनै आन्दोलन प्रवृत्तिविरुद्ध लक्षित छन् भने कुनैमा घटना विशेषले प्रधानता पाएका छन्। जे होस्, आन्दोलनका स्वरूपहरु तत्कालीन समाजको चेतनाको सापेक्षतामा त्यसैअनुरुप उठ्ने गरेका छन्। र, हरेक समयका हरेक आन्दोलनमा समाजभित्रकै फरक-फरक प्रवृति र विशेषता बोकेका पात्रले त्यसको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। कतिले साहित्य र कलालाई आफ्नो माध्यम बनाएका छन् भने कतिले सामाजिक जागरणको आन्दोलनलाई। कतिले संगीतमार्फत् आफ्नो विरोध जाहेर गरेका छन् भने कतिले सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेरै सशक्त प्रतिवाद गरेका छन्। चाहे आधुनिक विश्व इतिहासमा पहिलो पटक महिला मुक्तिको आवाज लिएर आन्दोलनमा उत्रने जर्मनीकी समाजवादी नेतृ क्लारा जेटकिन हुन् वा फ्रान्सकी नारीवादी लेखक सिमोन दी विभोर, साइवेरियाकी नातासा हुन् वा पोल्याण्डकी रोजा लक्जेम्वर्ग, बंगलादेशकी तसलिमा नसरिन हुन् वा भारतकी अरुनधती रोय, थुप्रै महिला योद्धाले समाजमा महिलाको हक अधिकार स्थापित गर्न आ-आफ्नो युगको नेतृत्व गरेका छन्।
Sunday, 10 March 2013 12:24	सम्पादकीय
राजधानीमा भत्काइएका बाटा सबै ठाउँमा बनेका छैनन्। नभत्काइएका बाटामा पनि प्रशस्त खाल्डाखुल्डी छन्। यस्तो अवस्थाले सवारी दुर्घटना त निम्त्याउँछ नै, साथै पानी पर्दा हिँलो र घाम लाग्दा धुलोको सास्ती ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतिर सवारी साधनले मनलागी तरिकाले बजाउने चर्का हर्नका कारण ध्वनि प्रदूषणले शहरबासीमात्र हैन, बटुवासमेत हैरान छन्। यस अर्थमा राजधानी फोहोर छ, राजधानी कोलाहलपूर्ण अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ र राजधानीको खासगरी शहरी क्षेत्र दर्जनौं जोखिमको थुप्रोमा बाँचिरहेको छ।
बाबुरामको बाह्र बुँदे
Sunday, 10 March 2013 12:23	किशोर नेपाल
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्ना निजी सचिव तथा सञ्चार व्यवस्थापक विश्वदीप पाण्डे मार्फत् बाह्र बुँदे सहमतिकै शैलीमा आफूविरुद्ध भएका बाह्र थान 'गलत' प्रचारको फेहरिस्त जारी गर्नुभएको छ। फेहरिस्तमा केही राष्ट्रिय, केही पार्टीगत र केही व्यक्तिगत बु"दा छन्। यमी फाउण्डेसन, बाइस धारा उद्यान, तिमिला यमी र केशव स्थापितको गँड्यौला प्रधानमन्त्रीका व्यक्तिगत बु"दा हुन्। यसमा प्रधानमन्त्रीले 'लोडसेडिङ घटाउन कुलेखानी जलाशयको पानी खर्च गरेर आगामी सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजेको' एक प्रतिपक्षी नेताको हास्यास्पद आरोप जोड्न बिर्सनुभएको छ। बा"दरमुढे र सुशील कोइरालाका प्रसंग उहा"को पार्टीगत समस्या हो भने प्रधानमन्त्रीका फेहरिस्तमा उल्लेख भएका अन्य आरोप सा"च्चै राष्ट्रिय हुन।
शान्ति स्थापनामा प्रहरी
Sunday, 10 March 2013 12:22	डा. तपनकुमार दाहाल
नेपालले विश्व शान्ति कायम गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको अभियानमा सेना तथा प्रहरी पठाएर आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र छविलाई विश्वमै उजागर गर्ने काम गरिरहेको छ। सन् १९५८ देखि सुरक्षा परिषद्को अनुरोधमा शान्ति स्थापना र युद्धविरामको रेखदेखका लािग ५ जना सैनिक अधिकृतको टोली लेबनान पठाएर सुरु भएको यो अभियानले अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको छ। अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ सेना/प्रहरी पठाउने गरिएको छ।
Sunday, 10 March 2013 12:22	नारायण निङलेखू
समयको व्यवस्थापन नामक पुस्तकमा व्यवस्थापनसम्बन्धी विज्ञ म्याक केले न्युयोर्कको एउटा अस्पतालमा एक युवकको आँखाको शल्यक्रिया गरिएको प्रसंग उल्लेख गरेका छन्। अठार वर्षीय ती युवक जन्मँदै दृष्टिबिहीन हुन्। विभिन्न अध्ययन र परामर्शपछि युवकको आँखाको शल्यक्रिया गर्ने निर्णय डाक्टरले गर्छन्। डाक्टरहरुको निर्णयबाट युवकको परिवारमा खुसी र उत्सुकता छाउँछ। आँखा देख्न सक्ने जीवनको पहिलो अनुभवमा युवकको खुसीको कुनै सीमा नरहने कल्पना सबैले गर्छन्। प्रकृतिको रूप, रङ र रचना देखेर युवक दंग पर्नेछ। नौलो उल्लास छाउनेछ। परिवारमा सुख र सन्तोषको नयाँ वातावरण आरम्भ हुनेछ। यस्तै कल्पना गर्छन्, घरका सदस्य र आफन्तजन।
यस्तो रह्यो युवा संघ महाधिवेशन
Sunday, 10 March 2013 12:20	नीरज आचार्य
नेपाली युवा आन्दोलनको संस्थागत विकासको अभिभारामा युवा संघ नेपालको लामो यात्राले विभिन्न उतारचढावका पाठ पढाएको छ। अनेक अभ्यासको ठीक/बेठीक सिकाउँदै आदर्शको राजनीति, खासगरी जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र जननेता मदन भण्डारीको पथमा हिँड्ने जुन जाँगर दिएको छ, त्यसको गुणका अघि दोषको कुनै मूल्य हुँदैन।
सक्षम छन् महिला
Sunday, 10 March 2013 12:19	शकुन्तला बस्नेत
समाजको वर्ग विभाजन सँगसँगै विकसित भएर आएको महिला असमानताको चरण त्यति बेला आएर चरम विन्दुमा पुग्यो, जतिबेला चाणक्यले आफ्नो नीति प्रकाशमा ल्याए। उक्त समयमा पनि असल र विवेकशील पुरुषहरु नभएका भने होइनन्, जसले महिलाको सम्मान गर्थे। तर अधिकांश विद्वान् तथा तत्कालीन ऋषिमुनिहरु पुरुष प्रधान समाजलाई स्थापित र विकसित गराउन विभिन्न धार्मिक मान्यताका आधारमा महिलामाथि भेदभाव गर्न लागिपरेका थिए।
जुल्फी र मुन्द्राको लय
Friday, 08 March 2013 10:22	युग पाठक
गत हप्ता मेरा केही मित्रले जुल्फी सलामत रहे/नरहेको विषयमा जिज्ञासा राखे। इच्छाकैदमा बन्द कोठाभित्र बसिरहेकाले मेरो जुल्फी त सलामत नै रह्यो। तर दर्जनौं युवाहरुको जुल्फी भने प्रहरीको हठधर्मी कैंचीको मारमा पर्यो। हजारभन्दा बढी युवाहरु प्रहरी खोरमा पुगे र तिनका अभिभावकले प्रहरी कार्यालयअगाडि लामो लाइनमा टाक्सिएर उभिनुपर्यो ।
महिला आन्दोलनका चुनौती
Thursday, 07 March 2013 09:41	ममता शर्मा नेपाल
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस (आठ मार्च) मनाउन थालेको अढाइ दशक नाघिसक्यो। तर महिला मुक्तिका कार्यसूची अझै पनि लक्षित समुदायसम्म पुग्न सकेका छैनन्। यो अवधिमा सतहबाट हेर्दा धेरै उथलपुथल भएको देखिन्छ।
सीमित विकल्प र अनिश्चित राजनीति
Thursday, 07 March 2013 09:40	डा. सुभाष पोखरेल
ठूलै व्यवधान नआए प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री हुने स्थिति देखिन्छ। प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको पद लिनुहुँदैन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसलाले अन्यथा गर्दाबाहेक रेग्मीको सिंहदरवार प्रवेशमा व्यवधान देखिन्न।
अमेरिकी परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा महिला
Thursday, 07 March 2013 09:37	जोन केरी
अमेरिकी विदेशमन्त्रीको पद ग्रहण गरेको पहिलो हप्तामै मलाई बर्माका साहसिला महिलाहरूको एक समूहसँग भेटघाट गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो।
राजीनामासँग गाँसिएका प्रश्न
Thursday, 07 March 2013 09:35	विश्वमणि पोखरेल
मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर भगवान कोइराला अहिले चर्चामा छन्। शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी प्रमुखबाट राजीनामा दिएपछि चर्चामा आएका कोइरालाको पुनर्बहालीको माग शिक्षण अस्पतालमा उठ्न थालेको छ।
भगवान राजीनामाको सेरोफेरो
Thursday, 07 March 2013 09:33	डा. सरोज धिताल
देशभित्र, देशबाहिर अनेक घटना भइरहेका छन्। यी सबै घटना समयको पदचाप भएर नजिकिन्छन्, चिन्तन मननका निम्ति ध्यान गृहको ढोका खोलिदिन्छन्, अनि टाढिन्छन्।
Thursday, 07 March 2013 09:29	सम्पादकीय
घरपछिको घर हो विद्यालय। जसले उसलाई बाँच्न सिकाउँछ। गरिखान सिकाउँछ। नैतिक शिक्षाको पाठ सिकाएर समाजमा उन्नततवरको जीवन निर्वाह गर्ने बाटो देखाउँछ। अर्थात् एउटा व्यक्ति के हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर उसको जन्म घरभन्दा पनि पढाइ घरसँग बढी सम्बन्धित हुन्छ।
Wednesday, 06 March 2013 09:54	प्रणव भट्टराई
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले डेढ वर्षअघि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हाल्नेबित्तिकै आफूले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने र सुशासन कायम गर्न सरकार कटिबद्ध रहने उद्घोष गरेका थिए।
निर्वाचन र संविधानमा अर्जुन दृष्टि
Wednesday, 06 March 2013 09:54	प्रकाश ज्वाला
नेपाली राजनीतिमा लागेको ग्रहण अझै हट्न सकेन र संविधान सभा निर्वाचनको सुनिश्चितता पनि हुन सकेन। यतिबेलाको राष्ट्रिय कार्यभार नयाँ संविधान निर्माण नै हो। संविधान निर्माणका लागि संविधान सभा अनिवार्य छ। हामी हिजोको संविधान सभा ब्युँझाउन अब सक्दैनौं।
Wednesday, 06 March 2013 09:53	कृष्ण अधिकारी
नेपाली समाजमा नागरिक समाजको भूमिका ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि मात्र स्पष्टरूपमा देखिन थालेको हो। अहिले नागरिक समाज साझा समस्याप्रति भन्दा पनि दलगत राजनीतिका आधारमा अघि बढेकाले उनीहरूको आलोचना पनि हुन थालेको छ।
दलीय नेतृत्वको खाँचो
Wednesday, 06 March 2013 09:51	विजय गुप्ता
नेपाली कांगे्रसका सभापतिले हालै प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार निर्माणको सम्भावना घट्दै गएको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसकै उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार बनाउने विचार राष्ट्रपति रामवरण यादवको भए पनि एकीकृत नेकपा माओवादीले उक्त धारणालाई आफ्नो भनी प्रचारित गरेको बताउनुभएको छ।
Wednesday, 06 March 2013 09:41	सम्पादकीय
विद्यालय बन्द छन्। पढ्नुपर्ने अवस्थाका बालबालिका धुलिमैदानमा रमाउन बाध्य छन्। अभिभावक भविष्यका यी कर्णधारप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नेबाहेक केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। उता नेपाल बन्दको रोग पुनः बल्भि्कएको छ। सडक सुनसान हुन थालेका छन्।